प्रियंका चोपडाले ४० टेकमा पनि पर्फेक्ट सट नदिएपछि...
नेपाल लाइभ शनिबार, मंसिर ६, २०७७, १५:१७
नयाँ दिल्ली- फिल्मी क्षेत्र नै यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ कुनै न कुनै गसिपले ठाउँ पाइरहेको हुन्छ। अहिले भारतीय चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको एक पुरानो इन्टरभ्यूको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। यो भिडियोमा उनले आफ्नो करियरको सुरूवाती दिनका बारेमा खुलेर बोलेकी छन्। उनले सन् २००३ मा आएको ‘अन्दाज’ फिल्मबाट आफ्नो बलिउड यात्रा सुरू गरेकी थिइन्। यही फिल्मअन्तर्गत रहेको एक गीतको सुटिङ गर्ने क्रममा उनले ४० रिटेक दिँदा पनि सही तरिकाको सट दिन सकेकी थिइनन्।
कोरियोग्राफरले फ्याँकिदिएका थिए माइक
इन्टरभ्यूमा प्रियंकाले भनेकी छन्, ‘त्यो गीत मेरो सुरूवाती चरणका गीतमध्येकै एक थियो। त्यो समयमा मलाई धेरै कुराहरू प्राप्त गर्नु थियो। मलाई अझै पनि याद छ, जब मैले त्यो गीतमा ४० रिटेक दिँदा पनि सही टेक नपाएपछि कोरियोग्राफर राजू खान (सरोज खानका छोरा)ले आफ्नो हातमा रहेको माइक फ्याँक्दै भनेका थिए- तिमी मिस वर्ल्ड हौ। त्यतिमात्रैले एक्ट्रेस बन्छु जस्तो लाग्यो तिमीलाई? जाऊ, डान्स कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकेर आऊ। त्यसपछि आएर पर्फर्म गर्नू।’
रदान सावित भएकी थिइन् गर्भवती ट्विंकल खन्ना
प्रियंकाले अगाडि बताएकी छन्, ‘यही क्रममा अक्षयकुमारकी पत्नी ट्विंकललाई लेवर पेन सुरू भयो। त्यसपछि उक्त सेड्युल केही समयका लागि रोकिएको थियो।’ यो समयलाई सदुपयोग गर्दै उनले कथक सिक्नमा लगाइन् र सही टेक दिन सफल भएकी थिइन् उनी।
प्रियंकालाई पहिलो पटक बोध भएको थियो अभ्यासको महत्त्व
प्रियंकाका अनुसार उनलाई कथक पण्डित वीरू कृष्णनले सिकाएका थिए। यसका लागि उनी प्रत्येक दिन ६-६ घण्टा अभ्यास गर्ने गर्थिन्। यहीँबाट आफूलाई अभ्यासको महत्त्व बोध भएको उनी सम्झन्छिन्। किनकी कथक सिकेपछि जब उनी पहिलोपटक सेटमा पुगेकी थिइन्, त्यसबेला उनको नृत्य पहिलाको भन्दा धेरै नै सुधारिएको थियो।
A post shared by Indian Pageants Official | ?? (@indianpageantsofficial)